दलित समुदायलाई पछाडि पारिएको हो आफै पछाडि परेका होइनन्
मैले यहाँ तथ्यांक र दलित समुदायले भोगेका समस्याहरूको मसिनो गरि लेख्ने जमर्को गरेको छैन किनभने हामी सबै यो विषयमा प्रत्यक्षदर्शी बनेर उभिएका छौँ । सबैलाई स्पष्ट छ ।आज मैले समग्रमा दलित समुदायको स्थिति र यसलाई निमिट्यान्न पार्नको लागि दलित युवाले गर्न के सकिन्छ वा हाम्रो भुमिका के हुनुपर्छ भन्ने मेरा केही तर्क र तथ्य प्रस्तुत गर्ने काेसिस गर्दैछु । यसलाई अध्ययन गरेर यहाँहरुले महत्त्वपूर्ण सुझाब दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा एवम् विश्वास छ।।
नेपाली समाजमा कलङ्कको रुपमा रहेको जातिय छुवाछूतको कारणले गर्दा नै दलितहरू समाजमा सबैभन्दा तल्लो दर्जाको नागरिकको रुपमा रहन बाध्य भएका छन् । सदियौंदेखि अपमानित भएर बाच्न परेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुले कहिल्यै आफु मानव भएको महशुस गर्न पाएका छैनन् । जयस्थिति मल्लले काममा आधारमा जात विभाजन गरेबाटै दलितहरूको कहालिलाग्दो नरकिय जीवन सुरु भयो ।जुनकुरा हाम्रा पुर्खाहरुले बिताएका जीवनलिलाका ईतिहाँसमा पढ्न पाईन्छ ।
दलित आन्दोलनका हस्तिहरुले पनि बताउने गर्दछन्। त्यही कहालिलाग्दो समयलाई पार गर्दै आज हामी यो समयसम्म त आइपुगेका छौँ । तर मानवको रुपमा बाच्न नपाउनुको सिकार हामी पनि भईरहेका छौँ । उपल्लो वर्ग भनिनेहरुले जहिले पशुलाई भन्दा तल्लो व्यबहार गरिरहदा अहिलेको परिवर्तित समयमा पनि पल- पल तड्पेर बाच्नुपरेको स्थिति हाम्रो सामु छ। पारिवारिक अवस्था र विभेदका कारण पहिले खासै पढेलेखेका थिएनन् हाम्रा अभिभावक । अहिले भने यदाकदा नपढेका पाइएपनि समग्रमा सरकारको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रणालीको कारण त्यो अबस्था पाइदैन। त्यतिमात्र होइन छोराछोरीलाई दुःख गरेर पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भएको छ।
वल्लो पल्लो घर र समाजमा मात्रै नभएर कार्यालय र विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा पनि दलित र दलित उत्थानका निम्ति काम गर्ने अग्रसर व्यक्तिले जातीय विभेद सहनु परेको स्थिति छ ।
दलित समुदायका समस्या अरुका भन्दा विशिष्ट छन् जसलाई उजागर गर्न सजिलो छैन । हरेक पाइलाले विभेदको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। समाजले दिएको अमानवीय क्रुर अवस्थाको सामना गर्दै परिवर्तनको पक्षमा आवाज उठाउन सोचेजस्तो सजिलो पनि छैन । कति हामीले आफै भोगेका छौँ भने कति यातना अभिभावकको मुखबाट सुन्न र प्रत्यक्ष आँखाले देख्न पनि गरेका छौँ ।एक्काईसौ शताब्दीको शिक्षित र चेतनशील मानिने समाजमा पनि पल - पल विभेदका घटनामा लडिबुडि खेल्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो पनि छ। गाउँका कुना काप्चामा मात्रै होइन शहरी क्षेत्रमा पनि जातीय विभेदका घटनाहरु थुप्रो बनेर थुप्रिरहेको हामीले देखेका छौँ । राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा भोग्नुपरेका समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । वल्लो पल्लो घर र समाजमा मात्रै नभएर कार्यालय र विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा पनि दलित र दलित उत्थानका निम्ति काम गर्ने अग्रसर व्यक्तिले जातीय विभेद सहनु परेको स्थिति पनि हाम्रो सामु एेना जस्तै बनेर बसेको छ।
अभाव र सामाजिक यातनासँगै परिवर्तनको लागि आवाज उठाउने हाम्रा योद्धाहरुको जीवन संघर्षले विगत र वर्तमानको यथार्थलाई केही हदसम्म उजागर गर्न सकेको त छ । तर धर्म र संस्कृतिको नाममा विद्यमान सामाजिक कुसंस्कारले सिङ्गो दलित समुदायलाई अहिले पनि उत्पिडन, अपमान र तिरस्कारको भुमरीमा बाच्न विवश बनाएको छ। जन्मजातै स्वीकार्नु पर्ने अछुतको कलङ्कका कारण गाउँदेखि शहरसम्म , देशदेखि प्रदेशसम्म विपन्न देखि सम्पन्न अवस्थामा रहेका दलितहरुलाई जीवनको पाईला- पाईलामा कुनै न कुनै रुपमा विभेदको सामना गर्नुपरेको तितो यथार्थ हामी सबैलाई अनुभव छ।
वर्तमानको तुलनामा विगतमा समस्या अझै कहालीलाग्दा थिए। अहिले त विभेदको पर्खाल विस्तारै तोडिदै छ। विभेदकै बिचमा पनि दलितहरु आफ्नो अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउन सक्ने भएका छन्। ग्रामीणतह देखि लिएर शहरी तहसम्म सम्मानपुर्वक जिउने समयको खोजी भइरहेको छ। हुन त अझै पनि एउटा अछुत भनिने व्यक्तिले उपल्लो भनिने जातको घरको मझेरी देख्न पाएको छैन। एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तनशिल समयको संघारमा उभिदा सम्म पनि शहरी क्षेत्रमा दलित कोठा भाडामा बस्न समेत नपाएका घटनाहरु यत्तिकै सेलाएका छैनन् ।
मानिस - मानिस बिचमै यो जात, त्यो जात, पुरुष महिला भनेर एकले अर्कोलाई विभेद गर्ने , एउटालाई शोषण गरेर अर्को रमाउने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि उत्पिडनमा पारिएका थुप्रै दलित योद्धाले बलिदान दिए। परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलनको अग्र पंक्तिमा उभिए। समाजमा पछाडि पारिएका समुदायको आवाज बुलन्द पार्न गाउँ - गाउँमा भिर पाखा पुगेर तीनै उत्पिडितको पक्षमा बोले, सहयात्री बने। देशका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा दलित समुदायको अग्रणी भुमिका थियो ।तर अहिले उनीहरुको योगदानलाई अोझेलमा पार्ने काम भएको छ। वर्तमानमा देखिएका सकरात्मक सन्देशहरु त्यत्तिकै प्राप्त भएका होइनन् ।
हामीलाई थाहा छ हाम्रा उत्थानका निमित्त हामी नबोली अरुले सुन्दैन। हामी बोल्नका लागि , हाम्रो अधिकार स्थापना गर्नका लागि दबिएको आवाजलाई प्रष्फुटन गराउन आवश्यक छ। परिवर्तनका लागि हामीले विगतका गतिविधिको मुल्यांकन गर्दै उज्ज्वल भविष्यको लागि वर्तमानमा आवाज बुलन्द पार्नु छ। धारोमा पानी भर्न जादा तथाकथित उपल्लो जातिका मान्छेले पानी नभरेसम्म हाम्रो पालो नआउने , कुकुर जस्तै उनीहरुको घरमा बाहिर अलग्गै बसेर खानुपर्ने र सानो उमेरदेखि नै समाजमा एवम् विद्यालयमा पनि हामीले भोगेका विभेका कुरा अहिले पनि हाम्रो मानसपटलमा ताजा नै छन् ।
उपल्लो वर्गको अश्लील र असभ्य गाली गलौजको वर्षात तथा अपमानजनक भाषा र दुर्ववहार भनिसाध्य र शब्दमा व्यक्त गरिसाध्य छैन। अझसम्म अधिकांश गैरदलितहरुमा पढेलेखेका र पद पाएका सम्मानित भएका दलितहरुलाई नमस्कार कसरी गर्ने भन्ने भावना छ। यसको उदाहरणमा दलितका जनप्रतिनिधि , कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी , शिक्षक, राजनीतिमा लागेका व्यक्ति र दलित अगुवा व्यक्तिहरु छन् । अन्तरजातीय विवाह पनि अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो। अधिकारका लागि लड्ने व्यक्तिलाई पनि तुच्छ व्यवहार गरिन्छ । दलित आफैमा दलित भएका होइनन् भन्ने कुरा अहिलेको शिक्षित समाजले नबुझेको होइन । दलितलाई पछाडि पारिएको हो आफै पछाडि परेका होइनन् भन्ने वास्तविकता सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ। यस्तो दयनीय र कष्टकर अवस्थाबाट मुक्ति पाउनको लागि अब हामीले केही न केही गर्नु आवश्यक छ। अहिलेको परिस्थितिमा हरेक निकायमा होस् वा राजनीतिक दलमा होस् जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति र भुमिका लाई प्रभावकारी र सम्मानजनक बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ। चेतनाको कमि, अशिक्षा , रुढीबादी परम्परा , बेरोजगारी र गरिबीजस्ता मुलभुत कुराले गर्दा नै दलितले सोचेजस्तो उत्थान हुन सकेको छैन।
केही पढेलेखेका र सचेत व्यक्तहरुले आफ्ना भावना तथा विचारलाई प्रस्तुत गर्ने तर व्यवहारमा परिवर्तन नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समग्र दलितको विकराल अवस्थालाई पार लगाउन सक्ने स्थिति छैन। बदलिँदो राजनीतिक परिबेश र दलित आन्दोलनले राज्यको हरेक तह तप्का र राज्यव्यवस्थामा दलितको सहभागितालाई महत्त्व दिएपनि त्यो बाध्यात्मक सहभागिता केबल सहभागितामै सिमित भएको पाइन्छ ।
दलित समुदायकाे उत्थानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको दलित युवा शक्ति नै हो । यिनीहरु जुझारु र जागरुक भएर लागेभने दलित आन्दोलन ने सफलताको मोड लिन्छ।
पहुँच , नियन्त्रण र निर्णायक तहमा अझसम्म पनि अर्थपुर्ण सहभागिता जनाउन दिईएको छैन। समानुपातिक सहभागिताको कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आएको परिवर्तनले एकप्रकारको आशा गर्ने स्थान त बनाएकै हो । अहिलेको राज्यको संरचनामा गराइएको सहभागिता र प्रस्तुति पनि महत्त्वपूर्ण र आशाजनक नभएको होइन तर पनि दलितहरुले त्यसको महशुस कतिसम्म गर्न पाएका छौ र गरेका छौँ भन्नेमा भरपर्छ। यो विषयमा गम्भीर चासो हुनुपर्छ । तसर्थ हामीले हाम्रो अधिकारको लडाइँ निर्धक्कका साथ लड्नुपर्छ। हाम्रा परम्परावादी सोचाइका घेराहरु र कागजमा कोरिएका एेनकानुन र व्यवस्थालाई दलितमैत्रि बनाई कार्यान्वयन गराउन अग्रसर भई एकताबद्ध ढंगले लाग्नु अहिलेको माग हो। हामी अहिलेका युवा पिढी भनेका भावि पिढिका लागि बलियो मार्गदर्शक र संबाहक पनि हौँ । उनीहरुले भविष्यमा पनि विभेदजन्य व्यवहार सहन नपरोस् भन्ने चाहन्छन् यो कुरा हामीले मनन गरेर हाम्रो भुमिकालाई शसक्त बनाउनु जरुरी छ। देशको परिस्थिति र पारिवारिक अवस्थाका कारण विदेशीएका युवा , देशमा नै भविष्य खोजिरहेका युवा लगाएत सम्पूर्ण दलित युवाहरूले युवा जोश जागर र चेतनालाई उजागर गर्दै सभ्य समाजको निर्माणमा लाग्नुपर्दछ।
सबै स्थान , क्षेत्रमा आफ्नो पहिचानको लागि प्रतिकार गर्न पछि पर्नुहुदैन। हामीले प्रतिकार नगर्नुलाई उपल्लो जात भनिने हरुले सहनशक्ति सम्झेर आफ्नो हेपाहा प्रवृतिलाई बढवा दिने गर्दछन्। त्यसैले पनि हामीले हाम्रो आवाजलाई शसक्त बनाउनु जरुरी छ। दलित समुदायका सम्पूर्ण बालबालिकालाई उच्चशिक्षा हासिल गराउन अौचित्यपूर्ण कदम चाल्नुपर्दछ।
दलित समुदायमा बढिभन्दा बढी खैलाबैला र अस्थिरता निम्ताउने तत्व जाँडरक्सी , जुवातास र बालबिवाहलाई लोप बनाउन युवाहरुनै सक्रिय हुनुपर्छ । त्यस्तै अर्को मुलजड जसलाई कथित उपल्लो जातिले दलितलाई निचोर्ने बलियो शक्तिको रुपमा लिने गर्दछन्। दलित भित्रको जातीय छुवाछूत पनि जरैदेखि उखेलेर नफालेसम्म मानवताका लागि लडेको लडाइँ असफल बन्छ। यसका लागि साहसिक कदम चाल्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो। जस्ताे विदेशमा दुःख गरि आर्जेको धनलाई उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना र बानीको विकास गरेर आर्थिक सम्पन्नतामा जोड दिनुपर्छ।
दलितहरूको उत्थानका लागि सरकारलाई दिर्घकालिन कदम चाल्न दबाब र सहयोग गर्नुपर्छ। दिनानुदिन देशमा भईरहेको जातीय विभेद , छुवाछूत , हत्या हिंसा र बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्नको निमित्त र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउनु पर्छ। मैत्रीपूर्ण समाज निर्माणका लागि , सबै मानवको अस्तित्व कायम गराउनको लागि सहकार्य, समझदारी र साझेदारीको बाटो नै अपनाउनु पर्दछ।
अन्त्यमा दलित समुदायकाे उत्थानका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको दलित युवा शक्ति नै हो । यिनीहरु जुझारु र जागरुक भएर लागेभने दलित आन्दोलन ने सफलताको मोड लिन्छ। तसर्थ समाजमा हामी पनि अरु मानव सरह जिउने वातावरण बनाउनको लागि एकढिक्का भएर सामाजिक , आर्थिक, भौतिक , नैतिक , शैक्षिक र राजनीतिक तवरबाट जगमगाएर उठ्नु जरुरत छ। यो सबैको जिम्मेवारी र साझा कर्तव्य पनि हो ।
अतः हाम्रा अग्रजको बलिदानलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो भुमिकालाई फराकिलो बनाउन हामी सबै जुटौ आजैदेखि , अहिलेदेखिनै। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने त ???
शुक्रबार, साउन १६, २०७७, १०:११:००
#कहिले सम्म ? #जातब्याव्स्था #छुवाछुत